को हुन् यि महिला ? ‘तपाई त कति राम्री’ भन्दै राजेश हमालले भन्थे, मेरो पछि लागेर हैरान पारे (भिडियो हेर्नुस्) – Kavrepati
Home / मनोरंजन / को हुन् यि महिला ? ‘तपाई त कति राम्री’ भन्दै राजेश हमालले भन्थे, मेरो पछि लागेर हैरान पारे (भिडियो हेर्नुस्)
को हुन् यि महिला ? ‘तपाई त कति राम्री’ भन्दै राजेश हमालले भन्थे, मेरो पछि लागेर हैरान पारे (भिडियो हेर्नुस्)
admin July 19, 2021	मनोरंजन Leaveacomment 100 Views
काठमाडौ । आफुलाई राजेश हमालले तपाई त निकै सुन्दर हुनुहुन्छ भन्दै जिस्क्याउने गरेको यिनको दावी छ । फिल्म छायाँकनको क्रममा पटक पटक राजेश हमालसंग भेट भएको र उनले आफुलाई नायिका भन्दा तपाई निकै सुन्दर भन्दै जिस्क्याउने गरेको उनको दावी छ । उनले आफुलाई राजेश हमालले छ्याउने गरेको पनि बताएकी छन् ।
बनस्थलीमा एउटा कम्पनीमा काम गर्थिन् । त्यहाँ त्यतीबेला महानायक राजेश हमालको फिल्मको छायांकन थियो । त्यती बेला उनलाई टाढा सम्म एक जना अग्लो मानिसले पछ्याउँदै आयो । उनले आफुले काम गर्ने गलैचा कारखानामा काम गर्ने अन्य कर्मचारीलाई पनि सुनाइन् । उनको कम्पनी नजिक एउटा बोर्डिङ स्कूल पनि थियो । त्यहाँ कराँते हुन्थ्यो । उनलाई त्यो सिक्न मन लाग्थ्यो ।
उनले माइक्रो बसवाट ओर्लिएर आफुलाई धेरै टाढासम्म पछ्याउने गरेको बताएकी ति ब्यक्ति महानायक राजेश हमाल हुन् । उनले आफुले त्यती बेला राजेश हमाललाई नचिनेको बताइन् । पछि त्यो मान्छेलाई आफुले फिल्ममा देखेको बताइन् । हिरोमा खेल्ने मान्छे हो भनेर आफुहरुलाई अरुले चिनाएको बताइन् । उनले त्यो घटना भएको केही वर्ष पछि भृकुटिमण्डपमा फिल्मको छायांकनको क्रममा फेरी राजेश हमालसंग भेट भएको बताइन् ।
राजेशले आफुलाई तपाइ त कति राम्री भन्दै पछ्याउने गरेको बताइन् । भृकुटीमण्डपमा फिल्मको काम हुँदा राजेश हमाल आफै बोल्न आएको पनि उनको दावी छ । तिमीले मलाई चिन्यौ भनेर त्यो मान्छे आफै बोल्न आयो, उनले भनिन्, भृकुटीको खेल खेलाउने ठाउँमा छायाँकन भएको बेलामा गौरी मल्लसंग काम गर्दा गर्दै रेष्ट हुँदा आफुसंगै आएर राजेश हमाल बसेको उनको भनाई छ । त्यती बेला उनको त्यही नजिकै एउटा सानो पसल थियो । हमाल आफ्नो पसलमा संगै आएर बसेको बताइन् ।
Previous प्रकाश सपुतले यिनै दुईओटा गीतबाट काठमाडौँमा भब्य बंगला किनेका थिए !
Next बिनिताको गाउमा भेटिइन १०५ बर्षिय एकदमै हसाउने आमा (हेर्नुस् भिडियो )